Sida Loo Sameeyo Keeg Aroos Ah + Cashar Video ah - Video Bilaash Ah
Wax kasta oo aan jeclaan lahaa waan ogaan lahaa markii aan sameeyay keeggii ugu horreeyay ee aroos dib 2009. Laga soo bilaabo qalabka ilaa farsamooyinka! Waxaan dib u sameynayaa musiibadaydii keegga aroos ee ugu horreysay oo aan ku tusaa sida loo sameeyo keega arooska guul markii ugu horaysay.
Waxaan kugula talinayaa inaad aqriso boostada oo dhan kahor intaadan bilaabin sameynta keegaaga arooska oo hubi inaad fiiriso casharka fiidiyowga dhamaadka boostadan.
Arooskeygii Ugu Horeeyay Musiibo
Runtii waan ku faani jiray keeggaan markaan sameeyay. Waxay ahayd keeggii aroos ee ugu horreeyay ee aan abid sameeyo 2009! Keegga wuxuu ahaa 12 ″ -10 ″ -8. ” 12-kii keega ayaa dildillaacay maxaa yeelay ma aanan simin lakabyada sidaas ayaan mid cusub u dubay. Ka dib waxaan u dhaqaaqay inaan isdulsaro keega cusub Diiran! Waad qiyaasi kartaa waxa xigay ee dhacay. Haa, mar kale ayay dilaacday. UGH!
Kadibna Dan wuxuu kexeeyey keeggan arooska ah ee aan la xakamayn muddo laba saacadood ah oo uu ku aaday aroos xeebta ka baxsan. Kuuskuus iyo leexasho iyo gariirka baabuurta ayaa horseeday in salka hoose uu isu beddelo qashin diiran oo burbursan. ⁠⁠ Looma baahna in la sheego, keeggan si fiican uma uusan sameynin. OH waxyaabaha aan jeclaan lahaa inaan ogaado markii aan bilaabay!
karinta lakabka qoyan ee xoqan
Wax fikrad ah kama haynin sida loo dubo iyo dhaxan keega ah. Sida loo helo geesaha fiiqan ama qaboojiyaha keega iyo xaqiiqda oo aan ahayn sida loo daboolo keega laba jibbaaran ee sida wanaagsan ee aad ku arki kartid qashinkeyga jajaban. Qeybtii ugu xumeyd waxay ahayd waan ogahay inay xumaan umuuqatay laakiin maanan aqoon sida loo saxo.
FHaddii aad la halgamayso mid ka mid ah waxyaalahan, kani waa barta boostada loogu talagalay adiga.
Dhawaan waxaan dhajiyay a sawir baraha bulshada ee keeggan arooska ee ugu horreeya si loo muujiyo in qof kastaa meel uun ka bilaabo. Dadku way ku kaftamayeen iyagoo leh waa inaan dib u sameeyaa, markaa waan qaatay caqabaddaas!
Waxaa jira waxyaabo badan oo aan jeclaan lahaa inaan ogaan lahaa waagaas. Ma jirin baraha bulshada oo aan wax ka barto, kaliya buugaagta! Buugaag oran lahaa, “isku duub lakabyadaada, dhaxan, oo ka dhig mid siman.” Wax fikrad ah kama haynin waxa ay taasi la micno tahay iyo sababta keeggeygu aanu ugu dhigmin sawirrada buugaagta ku jira. Laakiin taasi ima aysan joojin aniga haha!
Jadwalka Keega Arooska
Markii aan dubay keega arooska ee sabtida la keenayo, waxaan si caadi ah u bilaabi doonaa dubista Arbacada, ka dibna waxaan helayaa wax kasta oo jajaban oo khafiifa oo qabow Khamiista, markaa markaa waxaan haystaa Jimcaha oo dhan si aan u qurxiyo.
Had iyo jeer waxaan isku dayaa inaan keegayaga si buuxda u qurxiyo maalinta ka horreysa waqtigeeda si haddii aan dhibaatooyin u galo, aan haysto waqti aan ku saxo. Waa tan waqtigeyga adag ee qurxinta keega arooska.
Talaadada, sidoo kale waxaan fiiriyaa dalabyada keega ee usbuuca soo socda si aan u arko haddii aan u baahanahay inaan wax ka dalbado khadka tooska ah.
Talaado - Dib u eeg naqshadayda keegga si aad u aragto haddii aan u baahanahay inaan dalbado wax oo aan sameeyo liiskayga wax iibsashada.
Arbaco - Iibsashada alaabada alaabada, ka dhig mid aan jeclaado oo aan jeclaado.
Khamiis - Kee keegaga, ku kari qaboojiyaha, buuxi oo ka dhig iyaga jajaban oo ku nasan qaboojiyaha.
Jimcaha - Ku dhaji jaakada ugu dambaysa ee subagga loomaro ku keydi qaboojiyaha. Samee ubaxyo subag badan oo ku rid qaboojiyaha. Isku soo duub oo qurxin keega.
Sabti - Keen keeg. Sida iska cad, haddii keeggaaga la rabo maalin kale waad hagaajin kartaa jadwalkan.
Maxaad U Baahan Tahay Inaad Sameyso Cake Aroos
Tani waa tan aan ku sameyn jiray keeggaan arooska. Dabcan, haddii aad ka shaqeyneyso naqshadeyntaada, waxaad u baahan kartaa looxyo kala duwan, midabbo ama qaddar dhaxan / keeg.
Qalabka la Cuni karo
Waxaan ku daboolay keegagtaydii aniga oo isticmaalaya habka looxyada laakiin waxaad sidoo kale isticmaali kartaa habka hal-xabbo.
Keeg cad lakabyo, la dubay, la qaboojiyey oo la duudduubay (Waxaan ka sameeyay laba qaybood oo labalaab ah oo ka samaysan roodhidayda keegga cad si aan u helo laba 10 ″, laba 8 ″ iyo laba 6 layers lakab laba jibbaaran. Dhammaantood waa 2 ″ dherer.
10 rodol oo ka mid ah cadcad jecel (Waxaan sameeyay laba qaybood oo ka mid ah LMF Marshmallow Fondant ama waad isticmaali kartaa fondant kasta oo dukaan iibsaday oo aad jeceshahay. Waxaan door bidaa sumadda Renshaw Americas.
Qaboojinta buttercream fudud (Waxaan sameeyay laba qaybood oo laba jibbaaran oo dhaxan ah)
Waan isticmaalay acrylics si aan u helo keegaggayga runti waa laba jibbaar laakiin waa ikhtiyaari. Waxa kale oo aad isku dayi kartaa inaad ku barafeeysid keegaaga habka foorarin kaas oo aan isticmaali jiray sanado laakiin waxoogaa ka sii dheereeya.
10 ″, 8 ″, iyo 6 p Weelal keega oo laba jibbaaran, 2 ″ dheer. Waxaan hayaa digsiyo xariijin sixir ah.
10 ″, 8 ″, iyo 6 ″ acrylics laba jibbaaran (ikhtiyaar)
Makiinad cusub oo mandiil ah
Kartoonada keega laba jibbaaran (Haddii aad isticmaaleysid acrylics, u goe looxyadaada inay ahaadaan 9.5 ″ X 9/5, '7.5 ″ X 7/5,' iyo 5.5 ″ X 5.5 ″)
Middi weyn oo serrated ah
Caws dhumuc caano adag
12 board loox keeg ah ama durbaan keeg ah (waan jeclahay looxyada doolshe avare ) Ha u isticmaalin kartoon khafiif ah inaad ku taageerto keegaaga 3 darajo ah ama wuu dillaaci karaa oo burburi karaa)
Talooyinka tuubada ee ubaxyada loo yaqaan 'buttercream' - # 4 wareega, # 366 caleen yar oo caleen ah, # 104 caleen caleen ah
Kordhi ujawaab (ikhtiyaari ah laakiin waxay fududeyneysaa inuu barafoobo lakabyo waaweyn)
Sida Loo Kariyo Lakabyada Cake Meherka
Waxaan isticmaalayaa tayda karinta keega cad laakiin mid kasta oo ka mid ah cuntooyinka keegga ah ayaa la isticmaali karaa halkii. Qaar ka mid ah xeerarka aasaasiga ah ee dubista lakabyada keega arooska si guul leh.
Isticmaal digsiyo keeg oo tayo wanaagsan leh. Waan jeclahay buuran daddio ama khadka sixirka si loo hubiyo keeg si siman loo dubay oo leh geesaha toosan.
Isku darka sanduuqa ayaa sahlanaan kara in la isticmaalo laakiin si fudud oo qalafsan ayuu u kala baxayaa runtii si fudud. Haddii aad rabto inaad isticmaasho sanduuqa isku dhafan, iskuday WASC kaas oo subag lagu daray oo ka dhigaya keega mid cufan oo aad ugu eg guriga.
Waxaan buuxiyaa weelkeyga qiyaastii 3/4 ee habka buuxa waxaanan jecelahay inaan miisaamo digsi kasta si aan u hubiyo inay wada leeyihiin qadar isku mid ah doolshaha sidaa darteed si siman ayey u dubtaan oo ay u dhammeeyaan dherer isku mid ah.
Ka dib markaad dubto keegaaga, u daa inay ku qaboojiyaan 10-15 daqiiqo digsiga ka hor intaadan ku tuurin sagxad qaboojiye ah si ay u qaboojiso jidka oo dhan. Ka dib ku duub duub balaastig ah ama qaboojiye habeyn qaboojiyaha ama qabooji hal saac ka hor intaadan dalban jajabka.
Sida Loo Qaboojiyo Lakabka Cake Arooska
Helitaanka lakabka ugu dambeeya ee wanaagsan ee subagga ayaa qaadan kara waqti ka dheer intaad u maleyneyso. Waqti badan sii naftaada si aad u barafowdo dhamaan lakabyadaada oo waxaad siisaa waqti ku habboon qabow. Markaad wali baraneyso, waxay ku qaadan kartaa saacad halkii tier. Ha welwelin, waxaad ku degdegi doontaa tababar.
Keeggaaga ku hay qaboojiyaha. Mar alla markii keegaaga ay ku dul taal subag subag iyaga ayaa laga ilaalinayaa inuu qalalo markaa ha ka welwelin haddii ay u baahan yihiin inay ku jiraan qaboojiyaha dhowr maalmood.
Ka jar geesaha bunni dhinacyada, kor iyo hoose ee lakabyada keega aad qaboojisay.
Ku mari dahaadhkaaga 2 ″ keega nus dherer-caqli leh mindi la soo saaray.
Dhig lakabkaaga keega ugu horreeya wareega kartoonka, ku dhaji roog yar oo ah buttercream.
Ku dar buttercream dusha lakabka keega oo ku jilci spatula. Qulqulkaaga subag waa inuu ahaadaa qiyaastii 1/4 ″. Isku day inaad ka dhigto lakabkaaga dhaxan inuu ahaado mid dhumuc leh. Ku sii wad inta ka hartay lakabyada keegaaga.
Ku dabool lakabka keegaaga lakab khafiif ah oo subag ah oo loogu talagalay jajabinta. Jajabka jajabku wuxuu ku shaabadeeyaa dhammaan jajabka dabacsan ee keegaaga. Ku keydi qaboojiyaha si aad u qaboojiso illaa intaad adag tahay ama habeen dambe.
Codso lakabkaaga ugu dambeeya ee buttercream kuna keydi tier keega qaboojiyaha si aad u qaboojiso.
Marabtaa inaad waxbadan ka ogaato aasaaska samaynta keegaaga ugu horeeya? Ka daawo casharkeyga sida loo qurxiyo keegaaga ugu horeeya .
sida loo sameeyo kareemka la kariyey ee loogu talagalay qurxinta keega
Sida Loogu Daboolo Cake Kake Arooska Oo Fondant
Dhamaan keega arooskeyga dhamaadka-sare, waxaan u isticmaali doonaa gurigayga LMF marshmallow jacayl karinta ama jacaylka Renshaw America. Labaduba waa wax fudud oo lala shaqeyn karo, runtiina dhadhan fiican bay leeyihiin!
Tilmaamaha si guul leh loogu daboolayo keeg ku jira fondant
Ku shaqee keegga la qaboojiyey oo dhaqso u shaqee. Haddii dhidid badani kaa muuqato, u isticmaal saxaro hadhuudh galley ah si aad si fudud ugu xoqdo dusha sare.
Isticmaal jilciyayaal jilicsan si aad uga baxdo laalaabka iyo cilladaha.
Had iyo jeer shuruud si aad u jeceshahay ka hor intaadan u rogin si aad u yareyso jeexitaanka iyo maqaarka maroodiga.
Go'aanso haddii aad rabto guddiga keegaaga ama ku dabool hal xabbo oo jacayl ah .
Ku keydi qaboojiyaha qaboojiyaha qaboojiyaha.
Sida Loo keydiyo Aroosyada Keegga Cake
Ku keydi qaboojiyahaaga xiisaha badan qaboojiyaha. Waxaan ku keydsadaa qaboojiyaha caadiga ah ee guryaha la dhigto oo leh sariir la hagaajin karo oo aan lahayn qaboojiye. Heerkulbeegga ayaa loo dejiyey meesha ugu qabow diiran si keegagtaydu u ahaato mid la qaboojiyey laakiin aan ahayn SUPER qabow. Tani waxay yareysaa uumiga marka aad kala soo baxdo qaboojiyaha.
Markii aad ka soo saarto qaboojiyaha waxaa laga yaabaa inay ku uruuraan dusha sare laakiin kaliya ha u qalalaan si dabiici ah. Uumiga ma dhaawici doono keega.
Waxyaabaha aad sameyn kartid si loo dhimo dhididka:
Keeggaaga ku rid kartoon kartoon ah oo ku rid taa qaboojiyaha si marka aad u soo baxdo, uumiga uu ugu dul yaal kartoonka dushiisa oo uusan ugu oolin keegaaga. Waxa kale oo aad haysan kartaa marawaxad ka afuufaysa dusha sare ee keegaaga, oo u oggolow biyaha keegaaga inay si dhakhso leh u uumi.
Kaliya HA TAABAN jacaylkaaga ama ha ku dhex murgin marka ay dhididayso.
Bixinta keega la qaboojiyey ayaa aad uga fudud ugana badbaado badan in la qaado marka loo eego keega aan la dillaacin. Waxay u ekaan doontaa wax badan oo nadiif ah, nadiif ah wayna fududaan doontaa in la is dulsaarnaado.
Haddii keeg uu yahay seddex jibbaar ama wax ka yar, waxaan ku keydin doonaa keegga guriga kahor dhalmada. Waan ogahay inaan kor u qaadi karo keegga saddexda qaybood keligay ah waxayna ii ilaalisaa waqtiga bixinta.
Mararka qaar, naqshadayda keega ayaa sidoo kale ii baahan inaan isdul dhigo keega marka hore ka hor intaanan qurxin sidaa darteed ma lihi dookh.
Hubso inaad ka fikirto dhinacan marka aad ku jirto nidaamka qaabeynta. Waxaad u baahan kartaa inaad bedesho nashqaddaada haddii ay tahay inaad ku soo ururto goobta.
Hubso in tiirarka keegaga ay siman yihiin, la qaboojiyey oo ay jirto kartoon keeg ah oo ka hooseysa tier kasta.
Dhig digsi doolshe ah oo la mid ah heerkaaga labaad dusha sare ee tiirarka hoose isla markaana raaci dulmar.
Gali caws qaro weyn oo caano ah bartamaha oo ku calaamadee meesha ay ku habboon tahay dusha keega fartaada. Ku dhuuji caws meelaha dhaadheer ee saxda ah.
Adeegso tusaha taageerada keegga si aad u hubiso inaad ku dhejisid saxaraha meesha saxda ah.
Keeg ku xaji adoo culeyska kor ugu qaadaya spatula-kaaga miisaanka leh marka hore si aad gacmahaaga uga hoos mariso jaranjarada, ka dibna si taxaddar leh u noolow oo saar dusha dusha.
Ku buuxi wixii banaan ee u dhexeeya tiirarka xariiq subag ah.
Ikhtiyaari ah: U isticmaal qafis bartamaha dhammaan keegaaga si aad uga ilaaliso keega inuu taabto. Afeef dhamaadka 1/2 dow qori alwaax ah. Hoos ugusoo riix dariiqa keega sare ilaa inta ay ka gaadhayso salka hoose ee keega. Iska yaree xad-dhaafka. Qari daloolka dusha sare leh subag macaan.
Marabtaa inaad barato sida loo sameeyo keeg aroos wareegsan? Ila daawo aniga casharka arooska marbled tutorial
Qurxinta Cake Your Wedding
Waxaa jira siyaabo badan oo aad u qurxin karto keega arooska. Waxaan isku dayayaa inaan sameeyo naqshad la mid ah keegga ugu horreeya sidaa darteed waxaan sameynayaa ubaxyo subag ah.
Aniga ayaa sameeyay ubaxa buttercream subaxdii ka dibna ku dheji qaboojiyaha ilaa aan u baahanahay.
Ka dib markii keega ii duubnaado, waxaan qurxinayaa keega. Qeybta dhexe waxaa lagu daboolay qaar ka mid ah swirls buttercream dhuumaha iyadoo la isticmaalayo # 4 caarada wareega dhuunta.
Waxaan mariyey barafkeyga ubaxa buttercream keega oo leh dab biyo subag. Waxaan isku dayay inaan abuuro isla socodka ubax ee geesaha keega. Ku beddelashada ubaxa madow ubax fudud.
sida loo dhigo icuts on keega
Marka keeggayga la dhammeeyo, wax walba waxaan dib ugu celiyey qaboojiyaha si aan u qaboojiyo.
Gaarsiinta Keeg Aroos ah
Bixinta keeg waxay noqon kartaa qeybta ugu walaaca badan ee howlaha oo dhan. Keega ayaa ah midka ugu badbaado badan ee lagu daabulo dusha sare. Ha ku qabsan keeg dhabtaada. Waa wax aan macquul aheyn in la ilaaliyo heerka keega iyo kuleylka jirkaaga ayaa diirin doona keega.
Keega waa in si fiican loo qaboojiyaa ka hor inta aan la keenin oo lagu keenaa gaari aad u qabow, oo hawo qabow leh.
Waxaan ku geyn jiray keega sanduuqyada dirista ee guriga lagu sameeyo laakiin hada waxaan isticmaalaa a keega amaan kaas oo leh gunno dheeri ah oo ah nidaamka dowel dhexe kaas oo ka ilaaliya keega inuu dhaco inta lagu jiro dhalmada.
Haddii aad keeggaaga ku xirxireyso goobta, naftaada waqti badan sii (ugu yaraan saacad) si aad uhesho keegga, nusqaamaha u buuxsamaan iyo qurxinta lagu dabaqo. Marka ay tahay inaan dhigo ubaxyo cusub doolshaha arooska , saacad ayey igu qaadan kartaa inaan sii diyaariyo ubaxyada uu ubaxu ii daayay.
Ha keenin waqti hore. Waxaad dooneysaa keegga inuu fadhiisto heerkulka qolka dhowr saacadood maxaa yeelay subagga keega ku jira waa adag tahay in la qaboojiyo. Subagga adag dhadhan fiican ma leh. Laakiin haddii aad ku daadiso keegga qol kulul oo ay ahayd 8 saacadood, keeggu wuu daadan karaa oo dhici karaa. Waxaan tooganayaa 1-2 saacadood kahor xafladda waxaanan kugula talinayaa inaad ka tagto keega jawi diiran.
WHEW, waan ogahay inay ahayd tan macluumaad laakiin sameynta doolshaha aroosku ma sahlana sida maqaallada qaarkood ay u sameeyaan dhawaq. Markii ugu horreysay ee aan iskudayay inaan barto sida loo sameeyo keega arooska, wax walba oo aan aqriyay waxay ka dhigayeen kuwo aad ufudud laakiin markii dhibaatooyinku soo baxeen, waxaan ogaaday inaanan hayn dhammaan macluumaadka aan ugu baahnaa guusha.
Waxaan rajeynayaa in qoraalkan dheer uusan kaa niyad jabin sameynta keega arooska. Sidaad aragtay, khabiir maan ahayn markaan isku dayay keeggayga koowaad laakiin waad fiicnaatay. Qof kasta ayaa sameyn kara aroos qurux badan.
sida loo sameeyo keeg la farsameeyay
halka laga iibsado ukunta qolofta leh
i tus sawir nin sinjibiil ku jira